Maalinta: Juun 3, 2019
Waxa ay ku bilaabatay xilligii casriga ah ee gaadiidka dadweynaha nidaamka tareenka ee Izmir, Izmir Metro, on May 22 2000 1 billion Tan iyo markii laga soo galo ku galay adeega gaadiidka rakaabka. 19. Izmir Metro, oo sannadkii hore ka tagtay adeegga, [More ...]
Gaadiidka dadweynaha oo lacag la'aan ah inta lagu jiro fasaxyada ku yaal İzmir
Dhamaan baabuurta gaadiidka dadweynaha ee magaalada caasimadda ah ee Izmir waxay bixin doonaan adeeg lacag la'aan ah inta lagu jiro bisha Ramadaan. Qiimaha bilaashka ah ee 4 Juun Talaadada, 5 June Arbacada iyo, 6 ayaa la heli doonaa Khamiista, Juun. sidoo kale [More ...]
Rakaabayaal, Marti sharaf ah, Waxaan ku faraxsanahay inaan la kulanno Fadliga barakaysan ee Ramadan, oo ka tagay midnimo, saaxiibtinimo iyo walaaltinimo, oo ka dambeysa bil kale bisha Ramadan oo buuxa naxariis, cafis iyo faro badan. [More ...]
In kasta oo tirinta codadka Istanbul ay wali socoto, mashruuca Channel Istanbul waxaa lala socdaa xiisa badan. War saxaafadeedka ayaa lagu by Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan sameeyey oo dhan raaceen si dhow ula by Turkey [More ...]
Kooxaha Asphalt ee Ankara habeenkii Maalinta Bayram Mesaisinde
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa inay ka shaqeyso daminta daminta, dhajinta rafurka iyo wadooyinka dhinacwalba oo habeen iyo maalinba ah meelo badan oo ka mid ah Caasimadda si muwaadiniintu u qaataan fasaxa si nabadgelyo iyo amaan ah. Waaxda Shaqooyinka Sayniska ee Magaala Weyn [More ...]
Ayash Road-Sincan OSB Hawlaha Baabuurta Hoose ee Sii-socda
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa dayactirka afarta dhinac ee caasimadda iyadoo leh marinno cusub isla markaana la ballaariyo waddooyinka gobollada looga baahan yahay. Kepekli, Akköprü iyo Samsun Türk Telekom, kuwaas oo si weyn u neefsada taraafikada Ankara [More ...]
Manisa Magaaladda Sare
Marka la eego baaxadda 'Sannadka Gaadiidka Mudnaanta Dadka lugeeya' ee ay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ku dhawaaqday hal-ku-dhigga 'Ahmiyadaha nolosha, ahmiyadaha lugaha' ee sanadka 2019, Degmada Manisa Metropolitan waxay leedahay; Ahmiyadaha Lugaha [More ...]
Adeega Baska Kowaad ee u dhaxeeya Tarsus iyo Çamlıyayla
Bilaha xagaaga, Degmada Mersin ee Magaalo Weyn waxay ka bilowdey adeegga baska Tarsus iyadoo kordhineysa tirada dadka isla markaana ay marka hore siiso degmada Çamlıyayla halkaas oo plateau iyo bii'ada dalxiiska ay aad u kacsan yihiin. Iiddii Ramadaanka iyadoo ay baahida weyn ee muwaadiniintu qabaan [More ...]
Gaadiidka iyo Basaska Magaalada
Gaadiidka Gaadiidka ee Gaziantep, waxay qaadeen dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee bisha Ramadaan, muwaadiniinta, nasashada, nabadda iyo kalsoonida diyaarinta fasaxa si loo dhamaystiro diyaar garowga. GAADIIDKA WAXAY BILAASHO BARTAMAHA BUKAANKA BULSHADA [More ...]
Diyaarinta Idaacada Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri
Degmadda Kayseri ee Kayseri ayaa qaadatay talaabooyinka lagama maarmaanka ah si looga hortago wixii dhibaatooyin ah xilliga fasaxyada. Cabbiraadyada ayaa la kordhiyay si looga hortago khalkhalka gaadiidka dadweynaha, bilayska hoose, biyaha iyo korontada. Kacaanka weyn [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha iyo Baarkinka ee Konya
Magaalada caasimadda ah ee Konya, waxay qaadeen talaabooyinka lagama maarmaanka u ah gaadiidka muwaadiniinta Ramadaanka ee nabadda iyo raaxada. HORUMARKA DIB U HESHIISKA BARNAAMIJKA HORUMARKA IYO CUNTADA CUNTADA Konevi, Zindankale, Iplikçi ee Magaalada Muqdisho, [More ...]